Sawirro:Mareykanka oo Masar dib ugu celiyay Naxash 2,100 sano jiray oo lasoo xaday | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Sawirro:Mareykanka oo Masar dib ugu celiyay Naxash 2,100 sano jiray oo lasoo...
Sawirro:Mareykanka oo Masar dib ugu celiyay Naxash 2,100 sano jiray oo lasoo xaday
Image captionWasiirka arrimaha dibadda ee Masar Sameh Hassan Shoukry (dhexda) iyo Xeer ilaaliyaha degmada Cyrus R Vance (qofka labaad ee dhinaca midig) ayaa xaqiijinayay naxashka
Booliska dalka Mareykanka ayaa Masar dib ugu celiyay Naxash lasoo xaday, labo sano ka dib markii uu iibsaday madxafka Metropolitan Museum of Art ee ku yaalla magaalada New York.
Naxashkan oo 2,100 sano jiray ayaa horay loogu sameeyay meydka baadari lagu magacaabi jiray Nedjemankh, waxaana hadda la geeyay xarun lagu keydiyo qalabkii dadkii hore oo ku taalla dalka Masar.
Saraakiisha booliska ayaa sheegay in shabakad burcad caalami ah oo naxashkan ka xadday Masar ay ka iibisay madxafka, iyagoo isticmaalayay warqado been abuur ah.
Naxashkan dahabka dusha looga sameeyay ayaa dalka Masar si qarsoodi ah looga soo qaaday sanadkii 2011-kii.
“Baaritaannada aan sameynay waxaa kale oo aan ku ogaannay in naxashkan uu ka mid yahay boqollaal qalab oo ay xadeen isla xubnaha shabakaddaas ka tirsan”, waxaa sidaas yiri xeer ilaaliyaha Manhattan Cyrus Vance, mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters, xilli uu ku sugnaa xafladdii dib u celinta naxashkaas loo sameeyay oo Arbacadii ka dhacday magaalada New York.
Image captionNaxashkan waxaa Masar laga xaday 2011-kii
Naxashkan oo la sameeyay qarnigii 1-aad, dhalashada nabi ciise ka hor, ayuu madxafka New York ku iibsaday lacag dhan $4malyan oo doolar(£3.2m), waxaana ku khiyaanay shabakadda farshaxanka ka ganacsata ee laga leeyahay Iiraan.
Waxaa markii ugu horreysay markab lagu geeyay dalka Jarmalka, halkaasoo lagu hayay inta aan markii dambe loo dhoofinin dhinaca waddanka Faransiiska.
Madxafka Mareykanka ayaa lagu indhasarcaaday shati been abuur ah oo loo ekeysiiyay kuwii ay masar qalabka la dhoofiyo ku sharciyeyn jirtay sanadkii 1971-kii.
Waxaa sidoo kale la socday warqado caddeymo ah oo dhammaantood la been abuurtay, sida ay dacwad oogeyaasha Mareykanku u sheegeen warbaahinta.
Image captionNaxashkan ayaa madxafka Mareykanka looga iibiyay $4 malyan oo doolar
Saraakiisha ayaa sheegay in Naxashkan qadiimiga ah uu qabri ku aasnaa muddo 2,000 oo sano ah, ka hor inta aan la xadin sanadkii 2011-kii.
“Dhaxalkan ma aha mid ay leeyihiin dadka Masaarida ah oo kaliya, waa mid wax ku ool u ah dhammaan dadka bani’aadanka ah”, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Sameh Hassan Shoukry, oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters.
Waxaa Naxashkan mar daawasho ahaan loo soo bandhigi doonaa sanadka 2020-ka.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo kormeeray xarumaha Dowladda ee magaalada Boosaaso & Saldhigyada ciidanka
Next articleSawirro:Siday cirbixiyeennada Muslimiinta ah ugu tukan karaan hawada sare?
XOG:MD Farmaajo iyo Aadan Barre Ducaalle oo caawa isku arkay hotel Ruushka ku yaalo
XOG:Shaqsiga MD Farmaajo u rabo in madaxweynaha cusub Koofur galbeed oo Hal Arin Laga Yaabo Doorashada Uga Qeyb Geli...
Wararkii ugu danbeeyay Dad Shacab ah oo ku dhintay miino kula kacday G/Shabeellaha Hoose.
Dowladda Sacuudiga oo dib u soo celiyay xoolo laga dhoofiyey dekedda Berbera
DHAGEYSO:Maxaadan Ogeyn oo laga dareemi karaa hadaladii Gudoonka barlamaanka xili….
Musharaxiinta mucaaradka oo xalay furay shir labaad iyo qorshahooda cusub (Daawo)
Ciidamo Hubeysan Gaadiid Dagaalna Wata & Hub Badan Oo Gaaray Deegaankii Lagu Dagaalamay G/gaduud
Nin Dhalinyaro ah oo Dhibaato u gaar ah kala kulmay Xayiraadii Caronavirus (Daawo Sawirro)
Dagaal Culus oo ka dhacay Gobolka Baay & Wararkii ugu danbeeyay